Waxaa maanta lagu qabtay deegaanka Espoo oo ka tirsan Helsinki ee dalka Finland xus & dabaaldeg aad weyn oo lagu xusayay sanadguuradii aasaaskii maalintii dhidibadda loo dhigay ururkii Somali Youth League ee dhaqdhaqaaqii dhallinyarada Soomaaliyeed ee SYL.
Munaasabaddan oo ay ka soo qeybgaleen dadweyne aad & aad u fara badan laguna qiyaasay in ku dhow 270 illaa 300 oo ruux oo ka kala yimid dhammaan magaalada Helsinki & magaalooyinka kale ee hoos yimaada.
Xuskan oo ugu horreyn lagu furay aayadaha quraanka kariimka ah waxaa hadallo soo dhaweyn ah ka jeediyay Xildhibaanka laga doorto deegaanka ESPOO C/raxmaan Max'ud Cali "JIIMI", ahna qabanqaabiyaha munaasabadaha noocan ah ee loo sameeyo dadkii taariikhda ka galay halgankii gobannimodoonka Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa iyadna halkaasi ka hadashay agaasimaha dhaqanka & jaaliyadaha ee deegaanka ESPOO, Helena VARI oo ka hadashay muhiimadda uu leedahay xuska noocan oo kale ah, ummad waliba oo caalamka ku noolna ay leedahay munaasabado u gaar ah.
Dhinaca kale waxaa isna halkaasi hadallo qiimo leh ka soo jeediyay Dr. C/qaadir Cali Boolaay odey Soomaaliyeed kana mid ahaa dadka yare e goobjoogga u ahaa halgankii gobonnimodoonka Soomaaliyeed wuxuuna ku fogaaday taariikhdii dheereyd ee loo soo maray madaxbannaanida aan maanta harsaneyno ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay Dr. C/salaam Xaaji Max’ed oo isna ku guubaabiyay lagama maarmaannimada midnimada & wadajirka dadka Soomaaliyeed, wuxuuna dhallinyaradii halkaasi goobjoogga ka aheyd ugu baaqay in ay u soo jeestaan sidii ay dalkooda & dadkooda halganka ay ugu jiraan dib u dhiska uga qeyb qaadan lahaayeen.
Ugu dambeyntii waxaa isna halkaasi ka hadlay C/casiis Cali Ibrahim "Xildhiban" oo ah qoraa Soomaaliyeed horayna u qoray buugaag tiradoodu tahay 9 buug oo ka hadlaya Taariikhda, Dhaqanka & Suugaanta Soomaaliyeed, sanadkanna si gaar ah buuggiisii ugu dambeeyay ugu soo bandhigay taariikhda halgameyaashii gobannimodoonka Soomaaliyeed ee SYL & dhammaan halgankooda mirihii laga dhexlay ee madaxbannaanida dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya.
C/casiis "Xildhiban" ayaa ka codsaday dhallinyaradii Soomaaliyeed ee sanadkan ka soo qeybgashay xuskaasi lagama maarmaannimada barashada taariikhda dadka Soomaaliyeed.